बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका शिक्षकले पाएनन् दसैंमा तलब – Satyapati
सल्यान । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका भित्रका शिक्षकहरुले दशैँको मुखमा नै तलव पाउन सकेका छैनन् । अन्तिममा निकासा गरेको शिक्षकको तलव बैंक बन्द हुन मात्र १ दिन रहेको थियोे । नगरले पठाएको निकासा पत्रमा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै बैंकले विद्यालयको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सकेन । जसका कारण शिक्षक मारमा परेका छन् ।
कार्यालय नबस्ने कर्मचारीका कारण र समयमै नगरसभा बस्न नसक्नुको मुख्य कारण शिक्षकहरुले दशैमा तलव खान नपाएका हुन् । निजामती कर्मचारीहरुको खातामै तलब गयो, शिक्षकको तलब भने विद्यालय खातामै जान सकेन । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सल्यानका सदस्य शिखरकुमार यरीले यस नगरले शिक्षकमाथि बिभेद गरेको बताए ।
चाडपर्वको मुखमै तलब नपाएपछि चाडपर्व मनाउन समस्या भएको उनको भनाई छ । निजामतीलाई तलव खुलाउने सक्ने तर शिक्षकलाइ यो महामारीको समयमा समेत दशैँमा स्थानीय सरकार निरिह भएको शिक्षकहरु बताउँछन् । दिनभर बैंकमा कतिवेला तलव आउलाँ भनेर पर्खिएर वसेका शिक्षक लोकवहादुर विसीले तलव नआएपछि यस बर्षको दशैँ कसरी मनाउने भनेर समस्या भएको बताए ।
‘एक सुक्का पकेटमा रकम छैन, कसरी दशै खर्च टार्ने ?’ उनले दुखेसो व्यक्त गर्दै भने । गत बर्षजस्तै यस बर्ष पनि दशैँमा शिक्षकले तलव खान नपाएकोमा राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नगर अध्यक्ष नारद घर्तीले रोष प्रकट गरे । उनले नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको कडा विरोध गर्दै शिक्षकहरुमाथि नगरपालिकाले विभेद गरेको पनि बताए ।
नगरका प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत मनोज रेग्मी कार्यालयमा नबस्ने र जनप्रतिनिधिहरुको बेवास्ताका कारण यस नगरका शिक्षकहरु मारमा परेका छन् । प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत र नगरप्रमुख तथा उपप्रमुख नगर कार्यालयमा नआएको लामो समय भैसकेपछि नगरका शिक्षकसँगै अन्य सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संकेत गर्दै भने, ‘गाडी आयातमा कडा नीति अवलम्बन हुनसक्छ’
कोलकातामा जल्यो पानी जहाज, नेपाली व्यवसायीका १०५ कन्टेनर नष्ट
खर्च भएन विकास बजेट, कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमै ७८ लाख स्वाहा !
भारतमाबाट रातो अण्डा नेपाल भित्र्याइँदै